အစုလိုက်အပြုံလိုက်လျစ်လျူရှုနေစဉ်အစိုးရများကိုသင်မည်သို့ပြောင်းလဲစေနိုင်သနည်း။ : Martin Vrijland
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	နိုဝင်ဘာလ 8 2019 အပေါ်	• 8 မှတ်ချက်
မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များအတွင်းဆန္ဒပြမှုများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ကြရပြီး၊ များစွာသောလယ်သမားများ၊ ဆောက်လုပ်သူများနှင့်အခြားသူများသည်အမျက်ထွက်ကြသည်။ ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့မီဒီယာတွေဟာထိန်းချုပ်မှုကိုဖျက်ဆီးတော့မယ်ဆိုတာမြင်ရလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် Jeroen Pauw ကဲ့သို့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များသည်ဤပျက်စီးခြင်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်အမြင်ကိုထိန်းချုပ်ရာတွင်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည်။
ဒေါသထွက်နေသောမိဘများကိုအကာအကွယ်ပေးမည့်အစားလူငယ်စောင့်ရှောက်ရေး ၀ န်ထမ်းများသည်အမျက်ဒေါသမိဘများ၏အကြမ်းဖက်မှုကိုကာကွယ်ရမည် အလွဲသုံးစားမှု များစွာသောသူတို့သည်မိမိတို့၏ ၀ င်ငွေရရှိနိုင်သည့်ငွေကြေးနှင့်ဆိုင်သော - စုပ်စက်ကိုလှည့်ပတ်လေ့ရှိကြသည်။ စစ်သားများအားဗုံးဖောက်ခွဲခြင်းသည်အမှန်တကယ်လူသတ်မှုဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သောနိုင်ငံရေးသမားများမှကာကွယ်ရမည်။ လယ်သမားတွေဒေါသထွက်လာရင်ဝါဒဖြန့်ချိတဲ့သတင်းစာနံပါတ် 1 တောင်မှနယ်သာလန်မှာရှိတဲ့လူအများစုကပြည်နယ်ဟာစိမ်းလန်းစိုပြေရေးကိုပျက်ပြားစေတယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းသတင်းပို့ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ အကယ်၍ အားလုံးသည်လက်ထဲမှထွက်သွားပါကသင်ယိုစိမ့်မှုကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပိတ်ချင်သည်။ ဒတ်ခ်ျလူမျိုးများသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံအိတ်သို့မဟုတ်လုံခြုံစိတ်ချရသောအလုပ်ကိုထိမိသည့်အခါမှနိုးလာပုံရသည်။ လူသားများသည်များသောအားဖြင့်မိမိကိုယ်ပိုင်အလုပ်သို့မဟုတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၏ဒုတိယနေရာတွင်ရှိသည်ဟုထင်ရသော်လည်းမိမိကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံအိတ်သို့မဟုတ်လုံခြုံရေးထိခိုက်ခံရလျှင်ပုန်ကန်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
2019 အထူးသဖြင့်၊ ၎င်းသည်ပြည်နယ်အတွက်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေအလုပ်လုပ်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့များကိုခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ တိုက်ခိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်အသတ်ခံခြင်းခံရသည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ ရှေ့နေများသာမကယခုမှူးများ၊ လူငယ်စောင့်ရှောက်ရေး ၀ န်ထမ်းများနှင့်စာနယ်ဇင်းသမားများသည်နိုင်ငံတော်အကာအကွယ်ရရှိရမည်။ ၎င်းသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်မည်မျှထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေပြီးလူတစ် ဦး တစ်ယောက်ချင်းစီ၏ဆင်းရဲဒုက္ခများကိုမည်မျှခံစားရကြောင်းတစ်ခုခုပြောနိုင်ပါသလား။ စာနယ်ဇင်းသမားများသည်ရာဇ ၀ တ်ဂိုဏ်းများဟုခေါ်ဆိုခံရသူများဖြစ်သည်။ သို့သော်အဓိကအားဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝါဒဖြန့်သူများအားသူတို့၏အခြေအမြစ်မရှိသောသတင်းအတုများကိုအပြစ်ပေးအရေးယူခြင်းဖြင့်ဆက်လက်ခွင့်ပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အခြေအမြစ်မရှိ? ကောင်းပြီ၊ ကောင်းပါတယ်၊ ကောင်းပါတယ်၊ သိပ်မကြာသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီဂျာနယ်လစ်တွေနဲ့အမြင်မန်နေဂျာတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြောင့်ငါတို့မှာအမည်မသိသရဖူသက်သေဒါမှမဟုတ်အမည်မသိအရင်းအမြစ်ရှိတယ်။ စာသားအရအရာအားလုံးကိုမီဒီယာတွေကစစ်ဆေးပြီးအများပြည်သူကိုဆိုင်းငံ့ထားတယ်။
အခြေအနေတွေကနည်းနည်းပါးပါးကုန်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဟာအလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလိုအတိုက်အခံကိုအမြဲတမ်းစည်းရုံးတယ်။ Wim Kok သည်အလုပ်သမားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်မှနိုင်ငံရေးသမားတစ် ဦး မည်သို့ဖြစ်လာခဲ့သည်ကိုသင်မှတ်မိကောင်းမှတ်မိလိမ့်မည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းခုခံမှုရှိစေရန်အလုပ်သမားသမဂ္ဂများသည်ထိန်းချုပ်ထားသည့်ပုံစံဖြင့်ရေနွေးငွေ့များကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့်သူတို့၏ရှေ့တန်းလူများကိုလည်းအလားတူပင်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းရှိအရသာတိုင်းကိုကြီးမားသောအချက်အလက်စနစ်များသို့မဟုတ်ကြည့်ရှုသူများမှတိုင်းတာနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးမှုကို ဦး ဆောင်သောရေဒီယို၊ တီဗွီနှင့်လူမှုမီဒီယာတပ်များမှလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ ပြီးတော့မှားသွားရင်ခြိမ်းခြောက်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးသမားကိုမင်းရဲ့ဈေးကြီးတဲ့ ၀ န်ကြီးဌာနထဲကို ၀ တ်ရုံနဲ့မင်းကိုပို့ပြီးကင်မရာအမြောက်အမြားနဲ့အတူလူတွေကိုပါးနပ်စွာပြောဆိုခြင်းကိုနားလည်ပြီးနားလည်မှုလို့ခေါ်တယ်။ တစ်ခု၏အကြွင်းအကျန်အဲဒါလိုအပ်တယ်၊" Mark Rutte သည်သင်၏ပိုက်ဆံအိတ်သို့မဟုတ်သင်၏သုခချမ်းသာကိုပင်အလေးထားသည်ဟုသင်အမှန်တကယ်ထင်ပါသလား။ သင်အမှန်တကယ်ထင်မြင်ပါသလား။ နိုင်ငံရေးသမားတစ် ဦး (သို့) အလွန်အမင်းလစာပေးသောအမြင်မန်နေဂျာတစ် ဦး ပင်သင်၏သုခချမ်းသာကိုစိုးရိမ်ပူပန်သည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။ နံပါတ်
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းတစ်ခုခုကိုအခြေခံကျကျပြောင်းလဲလိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုထိမိပါက ၀ ံပုလွေဖမ်းရုံသာမကအမှားကိုအခြေခံအားဖြင့်စတင်ရှာဖွေရန်အချိန်တန်ပြီဖြစ်သည်။ ဒီအတွက်မင်းကမီဒီယာနဲ့နိုင်ငံရေးထက်ကျော်လွန်ပြီးကြည့်ဖို့လိုတယ်။ သင့်နှာခေါင်းကိုကျော်ကြည့်ပါ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်၌အခြေခံကျသောအပြောင်းအလဲများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကြီးအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်နှင့်မည်မျှအလွယ်တကူကစားနိုင်ခြင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကစားခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်ခြင်းနည်းလမ်းအားလုံးကိုလေ့လာကြည့်ပါက၎င်းကိုအခြေခံအဆင့်တွင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ tipp-ex ကိုဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်တင်ခြင်းဖြင့်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းရင်းများကိုတစ်ခုချင်းစီဖော်ပြရမည်။ ကျနော်တို့လှည့်ကွက်များနှင့်လှည့်စားပြုရပေမည် အလွှာအားလုံး ပရိုဂရမ်မှတဆင့်ကြည့်ပြီးလှည့်စားခြင်းနှင့်လှည့်စားခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်။ အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံရေးသမားများ၊ မီဒီယာအမြင်မန်နေဂျာများ (ဥပမာ Jeroen Pauw၊ Matthijs van Nieuwkerk စသည်) သာမကနိုင်ငံရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးသမဂ္ဂများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းသို့ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်မှုထိန်းချုပ်မှုများအကြောင်းကိုပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်စာအုပ်အသစ်၌လှည့်စားမှုအလွှာအားလုံးကိုဆွေးနွေးပြီးရှင်းလင်းသောပုံစံဖြင့်ဖြေရှင်းနည်းလည်းပါရှိသည်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်အရေးယူဆောင်ရွက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပြီးလှုပ်ရှားမှုကိုအမှန်တကယ်စတင်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ထင်မြင်ယူဆတဲ့အတိုင်းဒီပရိုဂရမ်းမင်းအလွှာအားလုံးကိုဖြတ်သန်းကြည့်ရှုခြင်းနဲ့စတင်တာပါပဲ။ မင်းစာအုပ်ကို Vrijland တကယ်ရောင်းချင်ပါသလား။ ငါ7ကိုဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာစိတ်လိုကိုယ်လျောက်ရေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲဒါကငါ့ကိုအများကြီးကုန်ကျတယ်။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်သည်ထို7နှစ်များကိုစာအုပ်တစ်အုပ်ထက် ပို၍ ကောင်းအောင်မဖော်ပြနိုင်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ထိုပြtroubleနာကိုကျွန်ုပ်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ တိုတိုနှင့်အမှတ်, ဒါပေမယ့်ဖန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အတူချရေးထား။ ငါစွမ်းအင်တွေအများကြီးထည့်ထားတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျနော့်အမြင်မှာတကယ်ကိုပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်။ အဓိကလူမှုရေးအပြောင်းအလဲအတွက်အချိန်ကောင်းဖြစ်ပြီးမျက်လုံးများသည်ဘုန်းအသရေနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဖွင့်မှသာလျှင်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။ ငါအကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ် ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပါ ဦး ။ သင်ပါဝင်ပါသလား
Thierry Baudet နောက်တဖန်အကြီးနယ်သာလန်လိမ့်မည်! တကယ်ပဲ!
8 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 15: 19
ဆန္ဒပြပွဲများအဘယ်အရာကိုလိုက်လျောခဲ့တာလဲ Nada ။ အကယ်၍ သင်သည်ဆန္ဒပြပါကတစ်ခုခုကိုသင်အောင်မြင်ပြီးသည်အထိအဖြူရောင်ပေါ်တွင်အနက်ရောင်ရောက်သည်အထိဆက်လုပ်သင့်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး 'အထက်တန်းလွှာ' ကမင်းကိုလှောင်ပြောင်လိမ့်မယ်။ သူတို့ကသူတို့ဆန္ဒပြမှုရဲ့တစ်နေ့တာမှာသူတို့ရဲ့အနည်းဆုံးဆန္ဒပြမှုကိုသူတို့ရဲ့ဇာတ်ညွှန်းထဲမှာထည့်ပြီးပြီ။
8 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 16: 06
တကယ်တော့သူတို့မှာအဖွဲ့အစည်းထဲမှာကိုယ်ပိုင် pawn တွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။
အတိုက်အခံကိုထိန်းချုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာကိုယ့်ကိုကိုယ် ဦး ဆောင်လမ်းပြခြင်းဖြစ်သည်
8 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 16: 34
အဲ့တာမှန်တယ်၊ ဒါကအလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါပြောခဲ့သလိုပဲ "ကံကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှု" မှာနေထိုင်ကြတယ်။ ချောင်းဆိုး။
လက်ရှိအခြေအနေကို George Orwell နှင့် Huxley ၏ရဲရင့်သောကမ္ဘာသစ်ကိုရောနှောနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ ကောင်းမွန်သောရောနှောခြင်း၊ ကော့တေးသည်လွဲချော်စရာမရှိပါ။ ရွှင်လန်းမှုယောက်ျားများသင်၏ script ကိုဆက်လက်အသုံးပြုသည်။
12 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 00: 33
Renske Leijten ကဤခေါင်းစဉ်အပေါ်ဤကဲ့သို့သောပြင်းထန်သောနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (နှင့်ကျွန်ုပ်၏အမြင်တွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်) တုန့်ပြန်မှုရှိရသည့်အကြောင်းရင်းကိုကျွန်ုပ်မနားလည်မီအချိန်အနည်းငယ်ကြာခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်အလွန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့် 8500 လူနည်းစုအုပ်စုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သို့သော်အစိုးရတွင်ပိုမိုချိုးဖောက်မှုများရှိသည်။ တစ်မိနစ် 22: 05 မတိုင်မီအထိယနေ့ခေတ်ခေတ်မှီသောဂါထာကိုတင်ဆက်သူကထပ်မံထပ်ခါတလဲလဲပြောကြားခဲ့သည် -“ ဒီဟာကဘယ်လောက်ဆိုးလိုက်လဲ၊ ဒါကတကယ်တော့ဒီနိုင်ငံသားတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့အစိုးရပဲ” ဆိုလိုတာကအစိုးရကနိုင်ငံသားတွေကိုကာကွယ်သင့်တယ်၊
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကြေငြာခဲ့တဲ့အဲဒီဝန်ကြီးတစ် ဦး ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာတွေ့ခဲ့တာလဲ။ "အစိုးရကနိုင်ငံသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ရှိနေတယ်။
တခါတရံငါအသုံးပြုသောနည်းလမ်းများမည်မျှထိရောက်သောအရမ်းလေးစားမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်မိဘများသည်ရှက်စရာ !! တခါတရံမှာမိဘတွေကိုသူတို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုသေးငယ်သော်လည်းစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများသို့နက်နက်နဲနဲနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသွားခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့ရဲ့အာရုံကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားပေးတယ်ဆိုတာကိုတစ်ခါတစ်ရံမှာကျွန်မမိဘတွေကိုရှင်းပြချင်ပါတယ်။
ထိုအတောအတွင်းငါကြိုးစားမှုရပ်တန့်။ အကယ်၍ စိတ်ရောဂါကုသမှုသည် (ရုပ်ပုံနံပါတ် 11-11 မှတစ်ဆင့်လက်လှမ်းမီနိုင်သည်၊ ကောင်းသည်၊ နှစ်ကြိမ်ရူးသွပ်သောနံပါတ်၊ lache!) ကိုအသုံးပြုပါကကျွန်ုပ်သည်အစောပိုင်းအဆင့်တွင်ဖုန်းခေါ်မည်ကိုစိုးရိမ်သည်။
12 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 00: 44
“ ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်သူတွေရဲကားထဲမှာမ ၀ င်လို့သင့်တော်တဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုအပ်တယ်။ ထို့အပြင်ဤကိစ္စတွင်လူနာတင်ယာဉ်မကြာခဏမလိုအပ်ပါ။ သင့်လျော်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤလူများကိုကျွမ်းကျင်သော၊ လုံခြုံသော၊ သာယာသော၊ ZonMW မှရှေ့ပြေးယာဉ်မောင်းရန်သင့်လျော်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ထောက်ပံ့ငွေတစ်ခုမှာတစ်နှစ်ကြာအောင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ ဤကာလအတွင်းသင့်လျော်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုမည်သည့်အချိန်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်အသုံးပြုသည်ကိုစောင့်ကြည့်လိမ့်မည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းခံရသောလူများ - ရှုပ်ထွေးသောအပြုအမူများနှင့်သူတို့ချစ်မြတ်နိုးရသူများ၏အတွေ့အကြုံကိုလည်း၎င်းကမည်သို့တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသနည်း။
"ကျွမ်းကျင်စွာ, လုံခြုံ, သာယာသော, stigmatizing လမ်းဖြင့်ပို့ဆောင်"
12 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 00: 51
စိတ်ပညာသည်ရှုပ်ထွေးသောအပြုအမူများရှိသူများနှင့်ပတ်သက်သော 1 အောက်တိုဘာ 2018 အတွက်စနစ်တကျအလုပ်လုပ်သောနည်းလမ်းကိုနားလည်ရန်အစိုးရမှမြူနီစီပယ်များအားပေးအပ်ထားသည့်တာ ၀ န်ဖြစ်သည်။
12 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 01: 13
ဟင်၊ ဒီလိုမျိုးကားမောင်းနေတာကိုငါမသိဘူး! ကံကောင်းထောက်မစွာငါနိုင်ငံ၏အနောက်ဘက်တွင်နေထိုင်ကြသည်!
သို့သော်လည်းမည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူရဲများသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြregularlyနာကိုပုံမှန်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရမည်။ ထိုအခါအေးဂျင့်သည် ၀ န်ထမ်းများ၏လုံခြုံရေးအတွက်မောင်းနှင်သည်။ စိတ်ရောဂါကုသမှုဒုတိယနှစ်တွင်ကျူးကျော်မှုအနည်းငယ်တိုးလာသည်။ Hendriks က“ ဒါကကျနော်တို့ကကားမောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ရဲတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်မှာရှာရမလဲဆိုတာသိတယ်။ ပြီးတော့လူ့အဖွဲ့အစည်းလိုပဲငါတို့နဲ့ရန်လိုမှုတိုးလာတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ယခင်အိမ်နီးချင်းသည်လူနာတင်ကားအစ်ကိုတစ် ဦး အဖြစ်တစ်သက်လုံးအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာလူနာတင်ယာဉ် ၀ န်ထမ်းများအပေါ်ကျူးကျော်မှုတိုးများလာသလားဟုကျွန်တော်မေးခဲ့သည်။ သူ၏အဖြေမှာရှင်းပါသည်။ ခြားနားချက်ကတော့ smarthpone နှင့်လူမှုမီဒီယာများကြောင့်ကျွန်ုပ်၏စစ်တန်းလျားသို့မပြန်မီကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုတစ်ခါတစ်ရံအကြောင်းကြားပြီးဖြစ်သည်။ ”
12 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 10: 19
ဟုတ်ကဲ့၊ များစွာသောလူတွေကို GGZ gulag ခေါ်ဆောင်သွားပြီးပါပြီ
« နိုက်ထရိုဂျင်ပြproblemနာကဘာလဲ၊ လယ်သမားတွေဘာကြောင့်ညည်းညူတာလဲ၊ အဘယ်ကြောင့်မြန်နှုန်းလျှော့ချတာလဲ။
ပထမအဆင့်မှာတံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ ဒုတိယအဆင့်သည်ဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည် - ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းခလုတ် »
တရုတ်နိုင်ငံမှ coronavirus သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကာကွယ်ဆေးထိုးရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုပေးသည်
Transgender အမျိုးသားသည်အမျိုးသမီးသုက်ပိုးအလှူရှင်နှင့်အတူ binary မဟုတ်သောပါတနာကလေးကိုမွေးဖွားသည်
ဘိုးရင်း ၇၃၇-၈၀၀ (လေယာဉ် PS737) ကိုဖြိုချခဲ့တဲ့အီရန်လေယာဉ်ပျံစနစ်ဟာတိုက်ခိုက်ခံရသလား။
ပြည်တွင်းစစ်၏ပထမ ဦး ဆုံးအရိပ်လက္ခဏာမြင်နိုင်ဖြစ်လာလျက်ရှိသည်ဘယ်လောက် Trump ယခုကုန်းနှီးခဲ့ပြီနည်း
ZalmInBlik op တရုတ်နိုင်ငံမှ coronavirus သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကာကွယ်ဆေးထိုးရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုပေးသည်
မာတင် Vrijland op ယူကရိန်းနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူ Erland Oscar Galjaard ကားမည်သူနည်း။
Zandi မျက်လုံး op တရုတ်နိုင်ငံမှ coronavirus သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကာကွယ်ဆေးထိုးရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုပေးသည်
Zandi မျက်လုံး op လစ်ဗျားလစ်ဗျားသည်ဥရောပ၌မည်သည့်နိုင်ငံများကတူရကီနိုင်ငံသို့ပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ရှိမည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်